Imidlalo – The Ulwazi Programme
Amaculo adumile ezingane uma kudlalwa
Thina esakhululela emalokishini sivame ukuthi uma sikhumbula izinsuku zethu sisakhula, sicabange imidlalo esasiyidlala ebuntwaneni bethu. Ngisho lezo zikhathi lapho impilo yayisalula khona umuntu engavelelwe izindleko nezinkinga zobudala. Kulendatshana ngizoke ngilobe ngamaculo esasiwacula uma sizitika ngokwenama emigwaqweni kwazise phela sasingaxakwe zinkinga ezitheni, yize sasihlupheka kodwa lokho kwakungayona into eyayisidikibalisa igazi kakhulu ngoba iningi lethu laliphila impilo … Read more
Categories Culture Tags amaculo ezingane, Imidlalo, imidlalo yendabuko, Music, nkosikhona duma, songs, Umculo
NgokwesiZulu abafana noma amabhungu aya ekwaluseni lapho asuke eqaphe khona imfuyo yabaNumzane, baqapha izinkomo ukuze zingadli zishaye ziqothe imbokodo nesisekelo emasini. Uma lamabhungu esekwaluseni kunemidlalo abayidlalayo abachitha ngayo isizungu. Eminye yayo eyokuzilolonga. Lemidlalo kubalwa kuyo ukuhlaba insema, ukubhukuda, ukubhasha kanye nakho ukungcweka, ukubala imidlalo embalwa. Ukungcweka umdlalo wezinsizwa namabhungu amancane abawudlala ekwaluseni, uma kungcweka … Read more
Categories Culture Tags amabhungu, Imidlalo, izinduku, izinsizwa, ukulwa, ukungcweka, ukwalusa
Umdlalo Wokushikila Kwezintombi
Ukushikila singakuyamanisa nemidlalo eyayenziwa uma kuhlangene izintombi nezinsizwa emicimbini ethize. Kodwa lona wawenziwa kakhulu uma kunomemulo wentombazane esuke isingena esigabeni sokukhula, lapho izinsizwa sezingaqala ziyishele intombi. Lapha izintombi zisuke zishikila, ukushikila ukuthi izintombi zihambe kwasa kuzigqaja noma ukuziqhenya. Lapha zisuke zivunele ziphelele zigqoke ngokwezigaba zazo emphakathini. Kubalulekile ukuthi siveze ukuthi akusibona bonke abantu besilisa ababa … Read more
Categories Culture Tags games, Imicimbi yesintu, Imidlalo, Traditional Ceremonies, ukushikila
Umama ngilambile U-“Ma ngilambile” umdlalo odwetshwa phansi, imvamisa uthandwa amantombazanyana asemancane. Lomdlalo udlalwa abantu abane kodwa nababili bayawudlala kodwa ubamnandi kakhulu uma niwudlala nibane kanyekanye. Kudwetshwa izikwele eziyishumi nesithupha phansi endaweni evulekile nje, abantu abazodlala bama emakhoneni alezikwele ezidwetshiwe phansi ngaphandle kwazo belungiselela ukuthi sebezoqala. Kumele kubekhona ozobaculela khathi bedlala noma baziculele bona khona bengazorobhana, … Read more
Categories Culture Tags Imidlalo, indigenous games
Ukuzingela kuwumdlalo njengeminye imidlalo ongabala kuyo imidlalo kanobhutshuzwayo, indlamu kanye neminye eyenza abantu bahlale bethokozile. Lomdlalo nawo uyabagwema abantu ekwenzeni izinto ezingalungile njengokuzinikela ekusebenziseni izidakamizwa kanye nasebugebengwini. Abantu abazingelayo babizwa ngokuthi amaphisi bazingela izinhlobonhlobo zezinyamazane kanti iningi lazo zitholakala emahlathini kanye nasezimobeni. Labo abasuke beyozingela baba amaqembu ahlukahlukene ukwenzela ukuthi uma iqembu ebelihamba phambili lihlulekile … Read more
Umgogo umdlalo odlalwa abafana uma belusile emadlelweni. Lena indlela yokuchitha isizungu nokuthi bathola nento abazoyidla ngoba kusuke kukude emakhaya ukuthi bayodla khona. Imigogo bacupha ngayo ukuze babambe izinyoni. Akuzona zonke izinyoni ezidliwayo. Umgogo ucushwa kanje: Uqala ngokubheka ukuthi kuleyondawo zikhona yini izihlahla ezihlangene lapho izinyoni zithanda ukuhlala khona. Into okuqalwa ngayo ukuhlanza indawo lapho kuzocushwa … Read more
Categories Culture Tags games, Imidlalo, Imidlalo yomdabu, indigenous games